किसान असन्तुष्ट, उपभोक्ता मारमा – Life Nepali
किसान असन्तुष्ट, उपभोक्ता मारमा
भरतपुर : दूधको मूल्य वृद्धि हुँदा पनि किसान खुसी हुन सकेका छैनन्। प्रतिलिटर ६ रुपैयाँ वृद्धि भएको मूल्यमा पनि किसान सन्तुष्ट नभएका हुन्। उत्पादन लागत बढी भएको अवस्थामा मूल्य वृद्धिले खासै फरक नपरेको गुनासो किसानले गरेका छन्। मूल्य बढ्दा पनि किसानलाई ११ रुपैयाँ घाटा परेको छ। दूध उत्पादनको लागत प्रतिलिटर ६३ रुपैयाँ छ। सरकारले भदौ २१ गतेबाट लागू हुने गरी दुग्ध विकास संस्थानले दूधको मूल्य प्रतिलिटर ६ रुपैयाँको दरले मूल्य बढाएको हो। बढेको मूल्यको ६९ प्रतिशत उत्पादकलाई र ३१ प्रतिशत उद्योगलाई पर्छ।
किसानको भागमा ४ रुपैयाँ १६ पैसा पर्न आउँछ। दूध उत्पादक किसान यो पर्याप्त नभएको बताउँछन्। बढेको मूल्यले आफूलाई सम्बोधन नगरेको गौरीगञ्ज दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्थाका अध्यक्ष इन्द्रप्रसाद घिमिरेले बताए। ‘मूल्य बढे पनि हामीलाई अझ घाटा छ’, घिमिरेले भने, ‘९ को चापट १५ सय पुग्यो, दूधको मूल्य जहीँको तहीँ छ कसरी सन्तुष्ट हुन सकिन्छ ? ’ किसानका लागि गरिएको मूल्य वृद्धिको असर भने उपभोक्तामा देखिएको छ। दूध किनेर खाने चिन्तित छन्। यसअघि प्रतिलिटर ७० रुपैयाँमा किन्ने गरेको दूध उपभोक्ताले ७६ रुपैयाँ तिर्नु पर्छ। उत्पादकबाट फ्याट ४ र गुलियो सहितको चिल्लो पदार्थ (एसएनएप) ८ भएको दूधलाई किसानबाट ५२ रुपैयाँ ५२ पैसामा खरिद हुन्छ। उद्योगले १ फ्याट निकालेर पनि उपभोक्तालाई उही मूल्यमा बिक्री गर्छन्। यसरी हेर्दा किसानदेखि उपभोक्तासम्म पुग्दा २९ रुपैयाँ ४८ पैसा बढी हुन्छ। उपभोक्तालाई भने सरकारले कुनै सहुलियत नदिएपछि मारमा परेका हुन्। दूध खरिद गर्नेले सबैको असर आफूमाथि परेको बताएका छन्। उपभोक्तालाई मात्रै असर पुर्‍याउने गरी मूल्य वृद्धि गरेकोमा उपभोक्ता आक्रोसित छन्। ‘सरकारले किसानलाई अनुदान नदिएर किनेर खानेको थाप्लोमा मूल्य वृद्धिको मार थुपारेको छ’, भरतपुर ४ कटहर चोकका विनोद न्यौपानेले भने, ‘किसानले मूल्य पाउनुपर्छ तर त्यसका लागि राज्यले अनुदान दिनुपर्‍यो नि।’
दाना, चोकर, घाँस र औषधिमा सरकारले अनुदान नदिएको किसानको गुनासो छ। उनीहरूले पशुपालनमा उन्नत नश्ल सुधार गर्ने व्यवस्थाको माग गरेका छन्। जिल्लामा झन्डै ५० हजार किसान दूध उत्पादनमा आवद्ध छन्। यहाँ दैनिक दुई लाख ८९ हजार दूध उत्पादन हुन्छ। चितवन जिल्ला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघले भने अहिलेको मूल्यलाई परीक्षणका रूपमा लिएको छ। यसअघि किसानले तोकिएको मापदण्ड पूरा भएको दूध प्रतिलिटर ४८ रुपैयाँ ३६ पैसामा बिक्री हुन्थ्यो। संघले प्रतिलिटर कम्तिमा १० रुपैयाँ बढाउनु पर्ने मागसहित आन्दोलनसमेत गरेको थियो। अहिले ‘पर्ख र हेर’ को अवस्थामा संघ रहेको अध्यक्ष रत्नमणि न्यौपानेले बताए। ‘बढेको मूल्यले किसानको लागतलाई सम्बोधन गरेको छैन’, न्यौपानेले भने, ‘उपभोक्तामा मार परेको गुनासो आएको छ, यसमा राज्यले अनुदानको व्यवस्था गरेर सबैलाई समेट्नु पर्छ।
उपभोक्तालाई भने सरकारले कुनै सहुलियत नदिएपछि मारमा परेका हुन्। दूध खरिद गर्नेले सबैको असर आफूमाथि परेको बताएका छन्। उपभोक्तालाई मात्रै असर पुर्‍याउने गरी मूल्य वृद्धि गरेकोमा उपभोक्ता आक्रोसित छन्। ‘सरकारले किसानलाई अनुदान नदिएर किनेर खानेको थाप्लोमा मूल्य वृद्धिको मार थुपारेको छ’, भरतपुर ४ कटहर चोकका विनोद न्यौपानेले भने, ‘किसानले मूल्य पाउनुपर्छ तर त्यसका लागि राज्यले अनुदान दिनुपर्‍यो नि।
Previous भैरहवामै समुद्रको झल्को दिने गरी कृत्रिम समुद्र तयार !
Next कोराला नाका खुलाउन चीनको तयारी